Norvezy: Fitantaran’ny Nanatri-maso Ny Vono Olona Tany Utøya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2011 6:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, македонски, Nederlands, 한국어, Italiano, srpski, русский, Français, 繁體中文, 简体中文, polski, English
Mbola tena tohina tamin'ilay famonoana olona faobe nahafatesana olona 85 raha kely indrindra izay nanatrika ny lasy politikan'ny tanora ny alin'ny Zoma 22 jolay 2011 tany amin'ny nosy Utøya any Norvezy izao tontolo izao. Ilay mpamono olona, izay fantatra ankehitriny fa i Anders Behring Breivik, dia nisandoka ho polisy talohan'ny nitifirany ireo olona rehetra nanodidina azy, ary nihaza ireo izay nitsoaka tany anaty rano. I Breivik ihany koa no noheverina voalohany ho nanapoaka baomba tany Oslo ora vitsy talohan'izao izay nahafaty olona fito ary niteraka fahasimbana be tamin'ny tranoben'ny governemanta.
Lanonana isan-taonan'ny AUF (Arbejdernes Ungdomsfylking) , fikambanan'ny tanoran'ny Antokon'ny mpiasa (Labour Party) Norveziana ny lasin-dohataona tao Utøya . Mivondrona hiresaka politika, hihaino hira, hanao fanatanjahan-tena ary hihaino ny lahateny ataon'ireo mpanao politika taloha sy ankehitriny, ny tanora rehetra avy amin'ny lafivalon'ny firenena. Ora iray latsaka avy eo amin'i Oslo afovoany i Utøya raha fiara. Vao marain'ny andro, talohan'ny nahatongavan'ilay mpitifitra, dia naneho ny fahana Twitter-n'ny AUF [no] ary koa ny tenifototra #Utøya fa mpandray anjara miisa 700 teo ho eo no midinika ny tontolo iainana, ny zon'ny vehivavy, ary koa ny politika any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. Avy ny orana tamin'izany, nefa tsara ny rivotra niainana. Taty aoriana, nangina ny kaonty Twitter.
Tantaran'ny olona afa-doza
Tamin'ny Sabotsy, naneho lahatsoratra mikasika ny fanatreha-maso ny zava-nisy tao amin'ny bilaoginy tamin'ny teny Norveziana i Prableen Kaur, 23 taona, mpanao politika eo an-toerana, ary tanora mpitarika avy any Oslo. Nitsoaka ny mpitifitra izy ary niezaka ny ho velona, nampiasa ny findainy, Twitter, sy Facebook hilazany ny fianakaviany sy namany fa mbola velon'aina. Nadikan'ny gazety Telegraph any UK amin'ny teny Anglisy ny lahatsoratry ny bilaogy iray manontolo tamin'ny Sabotsy. Olona anjatony maro no namela tsikera teo amin'ny bilaogin'i Kaur manolotra fanohanana sy firariantsoa.
Ireto misy andinidininy avy amin'ny tantarany mampivarahontsana :
Nifoha aho. Tsy nety nahita tory intsony. Nipetraka tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny aho. Nahatsapaho tohina, tezitra, faly, Andriamanitra, tsy haiko hoe inona. Betsaka loatra ny fihetseham-poko. Betsaka loatra ny eritreretiko. Matahotra aho. Taitra raha vao mahare feo kely. Te hanoratra mikasika ny zavatra niseho tany Utøya aho. Ny hitan'ny masoko, ny niainako, ary ny nataoko :
Nanao fihaonana maika momba ny olana izahay tao amin'ny tranobe taorian'ny fipoahana tany Oslo. Taorian'izay, nisy koa ny fihaonana ho an'ny mpikambana avy any Akershus sy ny Oslo. Taorian'ireo fihaonana, nisy olona betsaka, tena betsaka, tao anatiny sy ivelan'ilay tranobe. Nampionon-tena izahay tao fa hoe milamina izay teo amin'ilay nosy. Tsy nisy afaka naminany mihitsy hoe ho tonga any aminay ihany koa ny helo..
Mamaritra ny fisavoritahana sy ny horohoro i Kaur raha nahare feom-basy ireo olona nanodidina azy ary nitsoaka tany amin'ny efitra ambadika, nitady fialofana tany amin'ny rihana. Nanombola nitsambikina teny amin'ny varavaran-kely ny olona raha mbola nitohy ny fitifirana, ary nofaritany ihany koa ny tahony amin'ny mety hahafatesany noho izy nitsambikina farany. Namakivaky tokotany migodana izy ary nitsoaka lavitra tany amin'ny ala. Niantso ny reniny izy, nitomany, nilaza fa tsy hainy raha ho velona izy na tsia.
Tamin'io fotoana ioa, nibitsika izy hoe :
@PrableenKaur: Mbola velona aho.
Mbola mitohy ny tantarany:
Nitsambikina tany anaty rano ny olona ary nanomboka nilomano. Nitsotra teo amin'ny tany aho. Nanapa-kevitra aho fa raha avy izy, dia hanao mody maty aho. Tsy hitsoaka aho ary tsy hilomano. Tsy haiko ny mamaritra ny tahotra izay nameno ny lohako, ny zavatra niainako.
Nisy lehilahy tonga. “Avy amin'ny polisy aho.” Izaho moa nitsotra teo. Ny sasany moa nitabataba avy any aoriana fa mila manaporofo izany izy. Tsy tena tadidiko tsara ny zavatra tena nolazainy, fa nanomboka nitifitra ilay mpamono olona. Nasiany bala ny basiny. Notifiriny ireo manodidina ahy. Izaho mbola nitsotra teo ihany. Nihevitra aho hoe: “Efa vita izy izany. Eto izy. Hitifitra ahy izy izao. Tena ho faty.”Nikiakiaka ny olona. Reko fa voatifitra ny sasany. Ny sasany nitsambikina anaty rano. Teo aho. Nitazona ny findaiko tamin'ny tanako, nandry teo ambonin'ny ranjona vehivavy iray. Roa hafa nandry teo amin'ny tongotro. Mbola nitsotra teo aho. Naneno imbetsaka ny finday. Mbola nitsotra teo ihany aho. Nanao mody maty. Nandry ora iray teo aho raha kely. Tena efa nangina tanteraka. Nahodiko moramora ny lohany sao mety mahita olona mbola velona aho. Nijery ny manodidina aho. Rà no hitako. Tahotra. Tapa-kevitra ny hiarina aho. Efa nandry teo ambonina vatana mangatsiaka aho. Faty roa no nandry teo amboniko. Nanana anjely mpiambina aho….. .
Tsy hain'i Kaur na mbola hiverina ilay mpitifitra na tsia, ary nanapa-kevitra izy ny hilomano hanaraka ny hafa. Voavonjin'ny sambo iray izy ary nahita ny rainy sy ny anadahiny teo amoron-drano.
Tamin'ny làlany ho any amin'ilay lasin-dohataona tamin'ny 21 jolay, nibitsika i Kaur:
@PrableenKaur: An-dàlana ho any Utøya aho – ny kirimbarimban-dohataonako tena tsara indrindra.
Ary ny andininy farany amin'ny lahatsorany maneho ilay andro mampatahotra ao amin'ny bilaoginy dia manao hoe :
Ora maro no lasa hatramin'ny nisehoan'izany. Mbola tohina hatrany aho. Mbola reko daholo ny zavatra rehetra. Hitako ny fatin'ireo namako. Maro amin'ireo namako no tsy hita. Faly aho afaka nilomano. Faly aho fa mbola velona. Hoe niahy ahy Andriamanitra. Betsaka ny fihetseham-po, be ny eritreritra. Mieritreritra ny havako rehetra aho. Ireo rehetra izay nafoiko. Ny helo amin'izao sy tamin'izany eo amin'ilay nosy. Nivadika ho nofy ratsy indrindran'i Norvezy ilay kirimbarimban-dohataona tsara indrindra.